Mashaariicda bilyanka 100 bilyan oo doolar ayaa sii socda RayHaber | raillynews
Hometareenka100 mashaariicda mashruuca mega ayaa wali sii socota
20 / 07 / 2015 tareenka, GUUD, Tareenka dhakhso ah, hyperlinks, Headline, TURKEY
100 bilyan oo dollar ahee-mashaariic sii xawaaraha goynta: 100 bilyan mashaariicda ahee dollar aad iyo aad u horumar ceejinta buuxa Turkiga. Yavuz Sultan Selim Bridge boqolkiiba 70 ayaa shaqada la dhammeeyaa. 3 boqolkiiba boqol ka mid ah tunnel-ka Eurasian Tunnel 340 ayaa la dhameeyay.
7 Inkasta oo aan dawlada la sameyn karin ka dib doorashooyinkii la qabtay bishii Juun, mashaariicda mashruuca ayaa sii socota. Turkey ka badan 2023 billion dollars guud ahaan waxay keeni doontaa in 100 beegsadaan Istanbul Center Maaliyadda (IFC) Project, Tunnel Eurasia ah, Akkuyu Nuclear Power Plant, mashruuca TANAP, Turkey ee hadda, Lines Tareenka Xawaaraha Sare (YHT), Channel Istanbul, 3. Bridge, 3. Airport Domestic Car, Turkey National sida diyaarad rakaab gobolka socda mashruuc Rafaa waa in dunidu ku soo celin doonaa shirwaynaha. 70 waxaa lagu dhammeystirey Yavuz Sultan Selim Bridge kaas oo ku xirnaan doona dhinacyada Yurub iyo Anatoolka markii saddexaad. 3 boqolkiiba boqolkiiba mitirka 340 kun mitir 90 oo ku yaala tunnel Eurasia Tunnel (Mashruuca Jidadka Tikidhada ee Istanbul Strait Highway Tube) ayaa la dhameeyay. Mashruuca garoonka diyaaradaha ee saddexda ah, 7 wuxuu gaaray heshiis ah in uu amaahdo 4.5 Billion euros, halka bilihii ugu horreeyay, 500 million euro, uu ka yimid baanka Ruushka ka dib doorashooyinka. Si ay u fuliyaan gaaska dabiiciga ah Ruush in Europe marayo Mashruuca Turkey at wadataa la siiyo by Dhaqdhaqaaqa Turkish, hab maamuuska ayaa la filayaa in la saxiixo ugu dhakhsaha badan. Iyadoo ay socdaan geeddi-socodka kaabayaasha kaabayaasha ah ee mashruuca Xarunta Maaliyadda ee Istanbul (IFC), ayaa waxaa bilowday Wasaaradda Gaadiidka, Arrimaha Badaha iyo Isgaadhsiinta si ay u qaataan tareenka xawaaraha sare ee garoonka 5 iyo magaalada 15. Nidaamka dhismaha ayaa soconaya ka dib markii la aasaasay mashruuca Pipeline Natural Gas Pipeline Project (TANAP), oo loo yaqaan "Silk Road Energy", ayaa la dhigay bishii Maarso. Marka laga hadlayo baabuurka gudaha, shayga cusub ee 4 ayaa la tijaabin doonaa bisha soo socota. Iyadoo faahfaahin farsamo ee Mashruuca Istanbul ee Kanal, oo ah maalgelinta 15 bilyan oo doolar, ayaa la go'aamiyaa, qodidda ayaa la qorshaynayaa illaa dhammaadka sanadka.
Gaadiidka nukliyeerka ayaa culus
noqon doonaa gudahood baaxadda warshad Turkey ugu horeysay ee nuclear Akkuyu Nuclear Power Plant Project, aasaaskii dhismayaasha badda Akkuyu nukliyeerka ah ayaa la tuuraa. Sida laga soo xigtay warbixin helay labada dalka Turkiga oo markaas ka dhigaan aasaaskii maaraynta dhaqaalaha ee April, kooxda Ruushka ayaa sameynaya gaadiidka wareysiyo in baaqbaaq geedka ka hor taariikhda la qorsheeyay ee wax soo saarka ee korontada. Wada-xaajoodka warshadaynta nukliyarka nukliyeerka ee laga dhiso Sinop ayaa sii socota. Meesha maaraynta tamarta ee warshadda korantada saddexaad ayaa socota. Iyadoo ay weheliso warshadda saddexaad, qiimaha guud ee saddexda korantada tamarta nukliyarka ayaa lagu qiyaasay inay kor u kici doonto ilaa $ 60.
NORTH MARMARA BARNAAMIJKA IYO YAVUZ SULTAN BRIDGE
Ilaa hadda, 49,4 million m3 qoditaan iyo 21,6 million buuxinta m3 ayaa la dhameeyay. Waxyaabaha la taaban karo ee wax-qabad ee 31 viaducts, 22 hoos-gooyska, buundooyinka 2 ee 28 iyo 35-dhaafka ayaa la dhameeyay. Shaqooyinka ayaa sii wadaya jumladaha Riva iyo Çamlık oo leh 3. 305,00. Wax-soo-saarka wax-soo-saarka ee dib-u-dhiska ayaa la dhamaystiray nidaamka qaab-dhismeedka si toos ah ee Bosphorus Bridge iyo + 2015 mareeyahana waxaa laga gaadhay heerka badda labadaba. Wax soosaarka dhagax-xayawaanka ayaa sii soconaya. Taariikhda waxqabadka la filayo waa XNUMX.
90 MACALINTA EURASIA TUSAALE
Gawaarida Eurasia Tunnel, oo ku xirnaan doona qaaradda Aasiya iyo Yurub wadada ka hoosaysa dhulka badda, ayaa soo afjarmaya. Göztepe-Kazlıçeşme daqiiqad u dhaxaysa daqiiqo 100 ilaa daqiiqo 15 oo siin doona gargaar aad u weyn xagga gaadiidka ah ee Tareenka Eurasian 3 kun mitir 340 mitir 440 ilaa dhamaadka hawlaha qodidda. 3 boqolkiiba kun ee mitirka 340 kun mitir 90 ee Mashruuca Isgoysyada Wadada Tube-ka ee Istanbul. Wasaaradda Gaadiidku waxay qorsheyneysaa inay dhamaystirto mashruuca sanadka 2017, taariikhda furitaanka hore waa bilowga. Tuulada waxaa la rajeynayaa in la guto laga bilaabo Agoosto ilaa Diisambar 2016.
2 magaalo cusub oo leh Canal Istanbul
Mashruuca Channel ee Istanbul ee Turkey ayaa Xasad mashruuca aragtida dunida waxaa looga hadlay laba qaybood. Inkastoo ansixinta Golaha Qorshaha Sare ee Kanal Istanbul, ayaa waxaa la filayaa in dhismaha la bilaabo dhamaadka sanadka. Inkasta oo mashaariicda naqshadeynta magaalooyinka ay horay u diyaariyeen Kanal Istanbul, halka maalgelinta 15 bilyan doolar la sameyn doono, haddana mar kale ayaa looga doodi doonaa, qorshaha degaanka ayaa la sameyn doonaa kadib. Mashruucaan, oo horay loogu qorsheeyay in uu ku noolyahay 1.2 million, ayaa lagu soo celiyay 500 sababtoo ah cufnaanta. Magaalo 250 bin + 250 kun qof ama 300 bin + 200 kun ayaa la dhigayaa labada dhinac ee kanaalka. Iyadoo mashaariicda isku dhafan, waxaa lagu xisaabinayaa in qiimaha Kanal Istanbul uu gaari doono bilyan doolar iyo 50 ayaa lagu shaqeyn doonaa dhismaha kun oo qof.
Gaaskii hore ee TANAP 2018
Saldhigga TANAP, oo qaadan doona gaaska Azeri oo ku yaala Yurub, ayaa la qabtay bishii Maarso iyada oo munaasabadda taariikhiga ah ay ka soo qaybgaleen Aliyev, Margvelashvili iyo Erdogan. Mashruuca 10 bilyan dollar wuxuu siin doonaa amniga tamarta ee Yurub iyo ka qaybqaato dhaqaalaha Turkiga. Dhismaha mashruuca ayaa socota. Socodka gaasta hore ayaa la filayaa inuu ka bilaabmo 2018. Mashruuca TANAP wuxuu abuuri doonaa tabaruc muhiim ah dhaqaalaha Turkiga iyadoo la siinayo shaqooyin cusub iyo fursado shaqo. Kharashka mashruuca wuxuu gaari doonaa bilyan kun oo doolar kadib markii dhammaan wejiyada la dhammeeyo. 45 degmada 20 iyo tuulada 67 ayaa mashruucaan ku shaqaaleyn doona shaqaaleynta kunka 600.
15 tareenka xawaaraha sare ee magaalada
Magaalooyinka sida ANKARA, Konya, Istanbul ayaa isku xirnaan doona line-yada Tareenka Xawaaraha Sare (YHT), halka magaalooyinka sida Antalya, Izmir, Sivas iyo Kayseri ay isku xirnaan doonaan. Xaaladdan, TCDD iyo daraasadda mashruuca ayaa sii socota. 2-3 ayaa la rajeynayaa in ay maamusho xarumo badan oo YHT ah magaalada 15 sanadka gudihiisa. Turkey ayaa qorshaynaysa in ay isticmaalaan ay tareenka-xawaaraha sare ee u gaarka ah ee 2018.
Xarunta Maaliyadda 20 waxay soo saari doontaa bilyan doolar
Iyadoo geeddi-socodka kaabayaasha isku-dhafka ah uu ka bilowday Mashruuca Xarunta Maaliyadda ee Istanbul (IFC), shaqadu waxay socotaa dhammaystirka xarunta 2017. Waxaa lagu xisaabinayaa haddii mashruuca Xarunta Maaliyadda Maal-galinta ee Istanbul la fuliyo, wadarta guud ee 150 kun qof ayaa loo shaqaaleyn doonaa waxaana la siin doonaa dakhli sanadeedka 20 euro. Istanbul waxay noqon doontaa mid ka mid ah xarumaha maaliyadeed ee ugu muhiimsan aduunka.
Diyaaradaha Qaranka 70 waxay qaadi doonaan rakaab
Mid ka mid ah mashaariicda ka dhigi doonaa kaalin muhiim ah oo dhaqaalaha dalka Turkiga, diyaarad qaranka. Wasaaradda Gaadiidka, Arrimaha Badaha iyo Isgaadhsiinta ayaa bilaabay inay ka shaqeeyaan tiknoolajiyada mashiinka iyaga oo isu keenaya injineeriyiin Turkiga ah. Hantida waxaa sidoo kale loo qorsheeyay in la yareeyo diyaaradaha qaranka ee qaranka, halkaas oo shaqadu sii socoto xawaaraha buuxa. All qeybo ka mid ah dalka Turkiga ilaa sanadkii 2023 70 diyaarad rakaab gobolka qaranka looga golleeyahay in lagu soo saaro in ay degaanka. Mishiinada, qaybta ugu muhiimsan ee diyaaradaha, waxaa qorsheyn doona injineerada Turkiga.
Si ay u fuliyaan gaaska dabiiciga ah Ruush in Europe marayo Mashruuca Turkey at wadataa la siiyo by Dhaqdhaqaaqa Turkish, waxaa la filayaa in la qaado in xilliyada soo socda hab maamuuska. Wasiirka Tamarta iyo Khayraadka Dabiiciga ah Taner Yildiz iyo kooxdiisa ayaa wadahadal ku sameeynaya arrintan. Turkey iyo Movement Turkish ah ayaa waxay noqon doontaa mid ka mid ah hal dhibic ugu muhiimsan transit tamarta ee adduunka ee.
4 cusub ee baabuurta ee baabuurta gudaha
Waa geedi socod joogto ah oo loogu talagalay baabuurka gudaha ee sanadihii la soo dhaafay. Marka la eego isuduwaha Wasaaradda Sayniska, Warshadaha iyo Tiknoolajiyada, wajiga koowaad waxaa la dhameeyay dhammaadkii Maajo. Sida ku cad hoggaanka TÜBİTAK, shaqadu waxay timid marxalad iyo afar baabuur oo prototype ah ayaa la soo saari doonaa dhamaadka bisha Agoosto. Mar labaad, dhamaadka bisha soo socota, kala duwanaanta gaari koronto oo dheeri ah, gaar ahaan baabuurta gubanaysa gudaha ayaa la baadhi doonaa.
Georgia-Turkey dhismaha tareenka (Kars-Tbilisi) Turkey
Mashruucan hadda waa la dhammeeyaa, 2015 ayaa dhismayaal ah. Turkey-Georgia in dhismaha dhismaha tareenka; Turkey iyo Georgia, Azerbaijan iyo Central Asia waxaa la siin doonaa link rail kala go u dhexeeya Jamhuuriyadda Turkish. Waxaa sidoo kale loogu talagalay in dib loo soo nooleeyo Waddada Dhaqanka ee taariikhiga ah iyo horumarinta iskaashiga dhaqaalaha iyo dhaqanka ee wadamada.
Warshad quwad leh oo keli ah oo laga dhiso 2020
noqon doonaa gudahood baaxadda warshad Turkey ugu horeysay ee nuclear Akkuyu Nuclear Power Plant Project, aasaaskii dhismayaasha badda Akkuyu nukliyeerka ah ayaa la tuuraa. Dhismaha warshadda korontada waxaa lagu qorsheynayaa in laga bilaabo 2016. Dhismaha warshadda korontada waxaa lagu qorsheynayaa in lagu dhameeyo 2020 waxaana korontada ugu horreysa lagu soo saari doonaa 2022. Qiimaha Nuclear-Nuclear-ka (NGS) in lagu dhiso Mersin Akkuyu waxaa loo xisaabiyaa sida 20 bilyan oo doolar. Later, Japan ayaa dhisi doona geedka labaad ee tamarta nukliyeerka ah oo qiimihiisu yahay $ 22 ee Sinop. Iyadoo ay weheliso warshadda saddexaad, qiimaha guud ee saddexda korantada tamarta nukliyarka ayaa lagu qiyaasay inay kor u kici doonto ilaa $ 60.
Madaarka Cusub (Garoonka 3)
3 wuxuu ka dhigi doonaa Istanbul xarunta dhexe ee duulimaadka caalamiga ah. Dhismaha dhismaha ee dhismaha garoonka ayaa socda. Maalgelinta wada xaajoodyada mashruuca ayaa la isku raacay 29 October 2017 waxaa la filayaa inay dhamaystirto marxaladda koowaad. Marxaladda ugu horeysa, 70-90 sahanka jiilaalku waxay socotaa madaarka, oo leh malaayiin rakaab ah. Marka la dhammeeyo mashruuca, mid ka mid ah garoomada caalamiga ah ee ugu weyn adduunka waxaa lagu dhisi doonaa xarumaha 165 oo xadidan rakaabka, 6 baaskiil iyo dhismaha terminal 150 oo leh mitirka rakaabka rakaabka sannadka / sanadka. Qiimaha mashruuca waa XYXX bilyan oo euro.
Taariikhda dhammaystirka dayax-gacmeedka TURKSAT-5A 2018. Codsiyada farsamada ee la xiriira dayax-gacmeedka ayaa la diyaarinayaa. Boqolkiiba kuleylka TURKSAT-5A waxaa loogu talagalay inay noqoto taageerada gudaha ee 25. Wuxuu u shaqeynayaa TURKSAT-6A Isgaadhsiinta Qolalka Isgaadhsiinta iyo Mashruuca wax soo saar ee gudaha. Taariikhda la filayo in la dhameeyo waa 2019. TURKSAT AS wuxuu bilaabay inuu hormariyo mashruuca Satksum-6A iyadoo ujeedadu tahay soo saarida iyo soo saarida satalaytka gudaha. Türksat-6A Isgaarsiinta Degmadu waxay qorsheyneysaa inay adeegto xuddunta 42 ° East iyada oo ay weheliyaan xawaaraha X-Band ee Bss-Ku Rakabka.
Mashruuca Mashruucyada Macaamiisha ee Kayseri
TCDD ayaa isha ku haysa suuqa 100 bilyan doolar
Mashruuca Mashruuca Tube ee Baaskiilka ee Istanbul
Xarunta Maaliyadda ee Istanbul
mashruuca maddaarka saddexaad
Akkuyu Warshadda Nukliyeerka
Mashruuca Pipeline Pipeline Trans Anatolia
Tareenada caadiga ah waxay ku dhacaan Koonfur Afrika
mashaariicda Rafaa ee Turkey sii wadaan in ay soo jiitaan dareenka